I-U.S "snatch" imaski yenqwelomoya eyalelwa yiFransi: hlawula imali kwisikhululo senqwelomoya kwaye wandise abaVelisi nabaThengi-fektri baseChina - iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa nokuThumela iiRhwebo kumazwe angaphandle, Co.
[I-US "ihluthwe" imaski yenqwelomoya eyalelwa yiFrance: Bhatala imali kwisikhululo seenqwelomoya kwaye unyuse imali yokuthenga]
Ngokwendaba nge-1 ka-Epreli 1 wesikhululo sikamabonakude saseRussia kunye ne "ndaba yeNkululeko" yaseFrance ngo-Epreli 1, e-France usihlalo weBhunga lePhondo le-PACA uMuselli uthe xa iqela lezinto zokuzikhusela ngexesha likaxakeka lalizothunyelwa kwelinye ilizwe lisiya eFrance, Umthumeli-mpahla e-US ahlawule ngokuthe ngqo kwisikhululo seenqwelomoya kwaye anyusa amaxabiso, ebiwa imaski eyalelwa yiFrance. UMuselli uxelele iRussia TV namhlanje ukuba iPACA kunye neminye imimandla bayalele malunga nemaski ezizigidi ezingama-60 zizonke. UMuselli wathi ezi maski ekuqaleni zazicwangcisiwe ukuba zifike eFrance ngorhatya lwe-2 ka-Epreli, kodwa baqubisana neengxaki ezingalindelekanga, oko kukuthi, ukhuphiswano olungenabuhlobo oluvela eMelika. Kuthiwa kusasa ngentsimbi ye-1, umngenisi wasemazweni waseMelika wahlawula imali ngqo kwisikhululo seenqwelomoya kwaye wanyusa ixabiso, wathenga zonke iimpahla kumthengisi. Ukubaleka ngenqwelo moya okokuqala ukuya eFrance emva koko kwandiza eUnited States. Inkululeko yemihla ngemihla yaseFrance "Inkululeko" iphawule kwingxelo yokuba abantu baseMelika bazama ukuthenga naziphi na iimaski zamabala, ukuphazamisa ukuthunyelwa kwabathumela kwamanye amazwe kwamanye amazwe. Umthombo ongaziwayo wathi: "Bahlawula ixabiso kabini kwanangaphambi kokuba babone iimpahla, okanye basebenzise imali."